Libanona: Fitsidihana tampoka nataon’i Condoleezza Rice · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jona 2008 6:35 GMT
Vakio amin'ny teny Português, 繁體中文, 简体中文, македонски, عربي, Español, English
Ny Alatsinainy16 jona lasa teo, ny Sekreteram-panjakana Amerikana Condoleezza Rice dia nivahiny tampoka ora dimy tao Libanona. Nanambara izy ny fanohanan’ny governemantany ny filoha Libaney vao lany tsy ela akory izay, sy ny governemanta Libaney, ny mpitondra tenin’ny parlemanta ary ny rafitra demokratika ao amin’ity firenena ity. Nandritry ny ady nifandrotehan’i Israely sy Libanona tamin’ny 2006 izay nahafatesana olona maherin’ny 1.300 no fitsidihana farany nataon’i Rice tany Libanona. Izay olon-tsotra Libaney ny ankamaroany. Ireto ny ampahany vitsivitsy amin’ny akon’ity fitsidihana ity eo anivon’ny fitorahana blaogy Libaney :
Sursock dia nanamarika fa manaraka an’i Rice eny foana ny fahafatesana amin’ny fitsidihana ataony. Somary maneso sy mandratra ny fibangoany ireo tolo-kevitra rehetra mikasika ny fitsabahan’ny Amerikana amin’ny raharaha politika Libaney, na dia taorian’ny nilazany ny fihaonany tamin’ireo mpitarika Libaney aza:
Nilaza ny manampahefana Libaney fa telo raha kely ny olona maty nandritry ny fifandonan’ny mpomba sy ny vondrona mpanohitra ny governemanta tany amin’ireo tanana any atsinanan’i Saadnayel sy Taalbaya… Nitranga ny fifandonana raha iny nanao fitsidihana tampoka an’i Libanona iny i Condi “tahotra ny fahaterahana” Rice. Toy ny manaraka azy foana ny fahafatesana. Araka ny AFP:
Rice dia nilaza fa nanao izao dia [fivahinianana] izao izy “hanehoana ny fanohanan’ny Etazonia ny demokrasia Libaney, sy ny maha-masimandidy ny Libaney.”
Ity fanohanan'i Rice tsy dia mazava loatra ireo mpitarika Libaney sasantsasany ity dia nokianin'i Tantalus sy nametrahany fanontaniana mikasika ny asan'ireo mpitarika ireo izay nolazainy (Rice) fa nohamafisin'ny governemanta Amerikana:
Rice, niresaka tamin'ny mpanao gazety tao Ain al-Tineh hoy ny mpitondra teny Nabih Berri dia nahatsapa fa nakasitrahany ny fanamafisana avy amin'i Etazonia.
Somary mifangaro voraka ihany izany ho an'ireo milaza fa ireo maty eritreritra miaraka amin'i Berri no isan'ny namafy korontana nandritry ny andron'ny 7-21 may. Ireo zanakalahy antsoina hoe Berri-backed Amal sons-of-b*****s dia nitora-bato, nitifitra, nandoro kodiarana, niteny ratsy eran'ny tanana'i Beyrouth. Mbola fanamafisan'i Etazonia koa ve izany? Fa ahoana marina no fomba fiasan'i Etazonia?
Tears for Lebanon no nitatitra ny sasantsasany tamin'ireo fanakianana an'i Rice nataon'ireo mpanao politika vitsivitsy momba ny fandraisany ny “fifanarahan'ny 14 martsa” ho toy ny fianaran'ankizy:
Michel Aoun mpitarika ny Free Patriotic Movement dia nanakiana an'i Condoleezza Rice, sekreteram-panjakana Amerikana noho ny filazany ny fihaonany tamin'ireo mpitarika ny Fifanarahan'ny 14 martsa tamin'ny Talata teo ho toy ny “mpianatra nangonina tanaty efitrano fianarana iray.”
Na izany aza, notsindriany fa “misy resaka iray tsy voafaritra mazava, dia ny resaka fanomezana zom-pirenena ireo Palestiniana any Libanona”
Jnoubiyeh kosa naneho lahatsoratr'i Franklin Lamb izay namakafakany ny fitsidihan'i Rice ka ilazany fa:
Mety ho iny no fitsidihana farany ataon-dramatoa Rice any Libanona, nefa tsy ho ny farany amin'iny faritra iny izay manana salan'isa ankapobeny ho isaky ny 9 herinandro hatramin'ny nandraisany io toerany misy azy ankehitriny io. Rice, toy ireo eo anivon'ny fandraharahana Bush amin'ny ankapobeny ihany, dia mijanona ho isan'ireo tsy tian'ny olona aty Libanona noho ireo fanamarihany tsy voalanjalanja:” Izy ity (ny vono moka ataon'i Israely sy ny zera baomba) dia tahotra ny fahaterahan'ny Moyen-Orient vaovao”, “aloha loatra izao ho an'ny resaka fampitsaharana poa-basy azo tsapain-tanana”, “Israely dia mampihatra fotsiny izao ny zony hiaro tena ary Etazonia dia manohana izany zo izany”, sns. nandritry ny ady 33 andro, jolay 2006 sy ny asany [Rice] hikatsaka fampitsaharana poa-basy nandritry ny fifanandrinana izay nandraisan'ny Libaney anjara sy namoizany aina maherin'ny 1.400, naharatrana 4.500 ary naharavana foto-drafitrasa Libaney marobe hatramin'ny toekareny sy ny tontolo iainany.